राजनीतिको रोचक मोडः प्रधानमन्त्रीमा दाबिसहित ३०२ हस्ताक्षर सितलनिवासमा | कम्पनपाेष्ट डटकम
Home मुख्य समाचार राजनीतिको रोचक मोडः प्रधानमन्त्रीमा दाबिसहित ३०२ हस्ताक्षर सितलनिवासमा
Newly elected Nepali Prime Minister Khadga Prasad Sharma Oli, also known as K.P. Oli (L), speaks with the outgoing Prime Minister Sher Bahadur Deuba, after administrating the oath of office at the presidential building "Shital Niwas" in Kathmandu, Nepal February 15, 2018. Photo: Reuters
on: ७ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार १७:४९
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मार्ग प्रशस्त गर्ने भन्दै राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न माग गरेसँगै नेपाली राजनीतिमा बिहिबार रोचक दृष्य देखिएको छ ।
सरकार सञ्चालनका लागि विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था नरहेकाले मार्ग प्रशस्त गरेको बताएका प्रधान केपी शर्मा ओली पुनः प्रधानमन्त्रीका लागि दाबीसहित १५३ सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिसमक्ष गएका छन् । यस्तै ओलीले मार्गप्रशस्त गरेर राष्ट्रपतिले नयाँ सरकारका लागि आह्वान गरेपछि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित शितलनिवास गएका छन् ।
दुवैतर्फका गरेर ३०२ सांसद पुग्छन् । तर नेपालको सांसद संख्या २७५ हो । जसमध्ये विभिन्न कारणले हाल २७१ सांसद छन् । राष्ट्रपतिले दुवै तर्फको दाबी परेकाले केही बेर परामर्श गर्ने जवाफ दिएकी छन् ।
माधव -खनालनिकट २७ सहित सिङ्गै एमालेको १२१ र जसपाको पनि भएभरका बत्तिसै साँसदको समर्थन आफूसङ्ग रहेको काउण्टर दावी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रास्ट्रपतिसामु पेश गरेका छन् । उता शेरबहादुरसँग पनि १४९ सांसदको हस्ताक्षर छ । यसरी सांसदको हस्ताक्षर किर्ते भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यसअघि आजै पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूसँग बहुमत पनि नभएको र विश्वासको मत लिन पनि नसक्ने बताएका थिए ।
उनले सके आफूविरुद्ध सरकार गठन गर्न नसके आफूलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार आफूले पनि प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न सक्ने बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नदिए प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने र त्यसको जिम्मेवार आफू नहुने समेत भनेका थिए ।
यसैबिच पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि गरिएको प्रस्ताव टार्न खोजे प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘धारा ७६ (२) बमोजिम१४९ सांसदले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई प्रम नियुक्ति निम्ति गरेको प्रस्तावलाई कुनै किन्तुपरन्तु /जालझेल गरी टार्ने ठाउॅ छैन । उनले भनेका छन् ।
मध्यरातको खेल-प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पुगेन, संसद विघटन, चौतर्फी आलोचना